Wiko Y81: Ntinye ntinye ọhụụ na ụbọchị abụọ nke nnwere onwe | Gam akporosis
Oge egosiputa ekwentị ọhụụ na-ekwe nkwa ogologo oge ruo ụbọchị abụọ, ọ bụ ngwaọrụ dị mma yana oke ike. Wiko Y81 bụ smartphone e mere iji nwee ike ịrụ ọrụ n'ụbọchị n’emebighị batrị dị njikere.
Wiko Y81 ohuru abata ihe na-erughị euro 100 na mgbawa MediaTek, RAM zuru ezu na ụdị gam akporo kachasị ọhụrụ n'okpuru ụdị Go Edition. Ọ gụnyere igwefoto abụọ, nke azụ na LED Flash na ihu ihu nke na-enye anyị ohere iwepụ snapshots dị mma ma mee mkparịta ụka vidiyo dị elu.
1 Wiko Y81, ihe niile gbasara ọdụ ọhụrụ
Wiko Y81, ihe niile gbasara ọdụ ọhụrụ
Wiko Y81 na-abịa site na imikpu 6,22 nke anụ ọhịa iji nye ahụmịhe mgbasa ozi dị oke mkpa, iji nwee ike igwu egwuregwu, lelee ihe nkiri ma nwee mkpebi mkpebi dị elu. Igwefoto dị n'ihu bụ megapixels 5, ọ nwere ọtụtụ ụzọ iji weta ọkụ na foto niile ị were.
Ihe nhazi ahọpụtara bụ ihe nlere MT6761D (Helio A20) site na MediaTek na 1,8 GHz, 2 GB nke Ram na nchekwa ruru 32 GB na ịgbasawanye site na oghere mgbasa MicroSD ya. Batrị ahụ bụ 4.000 mAh ma kwe nkwa ihe dị ka ụbọchị 2 maka ụgwọ 100%.
Igwefoto azụ bụ naanị otu, bụ amamiihe 13 megapixel Go igwefoto na-abịa na ihe ikanam Flash iji nweta foto na ọnọdụ ọ bụla, Mma Mma, Lens Go na Bokeh. Ọ bụ ekwentị 4G, ọ na - etinye Wi-Fi, Bluetooth, ọdụ ụgbọ USB na jaak 3.5 mm. Usoro ahọrọ ahọpụtara bụ gam akporo 10 Go Edition na ngwa ndị ndị nrụpụta France wụnyegoro.
IKIRU 6.22-anụ ọhịa IPS LCD bara uru na mkpebi HD + (1.520 x 720 pikselụ) - 270 ppi
Nhazi MediaTek MT6761D 1.8 GHz
Ohere TERLỌ N'IME 32 GB - O nwere oghere MicroSD ruo 256 GB
Gbanwee CAMERA 13MP Gaa ihe mmetụta isi - 4x mbugharị dijitalụ - Igwe ọkụ
N'ihu CAMERA 5 MP
Njikọ 4G - WiFi - Bluetooth - USB - USB OTG - 3.5mm Jack
Atụmatụ ndị ọzọ Kpọghe ihu
Mkpụrụ na arọ: 157.9 x 76.1 x 8.3 mm / 166 gram
El Wiko Y81 ga-abata na September 15 gaa ahịa Spanish Maka ọnụahịa nke euro 99,90 na otu agba agba, a na-akpọ ya Blue Blue. Ọ ga-abanye na mpaghara nke ekwentị ntinye nwere nnwere onwe dị mkpa, ọ bụ isi okwu nke ekwentị Wiko ọhụrụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Wiko Y81: Ntinye ọhụụ ọhụụ na ụbọchị abụọ nke nnwere onwe
Ekwentị nwere ihuenyo ngebichi? Samsung na-esote iche